Kedu ihe bụ onye na-edozi na otú e si eto ya na saịtị gị - Plum - 2019
A na-etolite Plum ruo ogologo oge. Ọ dị obere izute onye na-adịghị enwe mmasị na mkpụrụ osisi ndị a na-adọrọ mmasị ma dị ụtọ. A na-eji ugbo n'ebe ọ bụla: ha na-eme ka ndị na-atọ ụtọ, ndị na-eme ihe oriri, ndị na-edozi ahụ, nri. Enwere ike ịsị oyi ma kpọọ ya. Ndị nwere ụlọ, nwere ike ịmalite ọtụtụ ụdị plums, n'emeghị mgbalị ndị pụrụ iche. Otu n'ime ụdị ihe dị iche iche a na-adọrọ mmasị bụ ụdị ụda ahụ.
Ọdịiche nke ogwu site ogwu
Nhọrọ nke saịtị maka kere ternosliva
Ịgha mkpụrụ seedlings bụ dwarfs
Nlekọta na ịkụ mkpụrụ osisi osisi
Mmiri mmiri na-emeri
Nkọwa nke ụdị dwarfs
Kedu ihe bụ ternoule: atụmatụ ndị dị ndụ
Akpa dips pụtara n'ihi uto sitere n'okike, ya na nkwonkwo aka nke blackthorn na umu ohia di iche iche. Nsonaazụ a dọtara uche nke ndị na-azụlite ndị malitere ịmepụta ụdị iche iche.
Ị ma? Umu na akwukwo akwukwo di ka otutu ogwu. Ọbụna Michurin kpọrọ ụdị nri ọ na-eri na ternum ụtọ ma na-atọ ụtọ ternoy.
Mmiri mmiri mmiri, ma ọ bụ osisi ogwu, bụ nke ezinụlọ Pink, nkọwa ya dịkwa iche site na ogwu. Nke a bụ osisi shrub nke na-eto eto ruo mita 4 n'ịdị elu, ma ọ bụ obere osisi nwere mgbọrọgwụ siri ike. Isi uru nke dwarfs bụ ihe siri ike ma na-amị mkpụrụ.
Akwụkwọ nke extrusion bụ obere (4.5 cm), oblong-elliptical, serrated na n'ọnụ. Ọ na-achagharị na okooko osisi ọcha ndị nwere akara nke 1.5-3 cm, nke na-acha akwụkwọ tupu epupụta.
Mkpụrụ nke plọl plum bụ ihe atụ, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nwa na agba ntụ na agba ntụ. Anụ ahụ dị oke, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke nwere uto na-atọ ụtọ, kama tart. Na tomato chara n'onwe ke August-September ma nọgide na alaka ruo mgbe oyi.
Maka ihe ka ukwuu, shreds ejigidela ihe niile bara uru nke ogwu, ọ bụ ezie na mkpụrụ osisi ya dị ukwuu karị, ọ naghị atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Na shrub nke dwarf nwere obere ogwu karịa sloe.
Ihe mejupụtara mkpụrụ osisi dwarf dị obere site na ogwu.
Otú ọ dị, n'ọhịa ọhịa, e nwere obere shuga - 5-6% (na mgwakota agwa - 12-14%) na ndị ọzọ tannins na acid.
Ị ma? N'elu afọ dị ukwuu, ọkpụkpụ, nke dị n'ime ụlọ puku afọ abụọ.
Nhọrọ nke ebe na saịtị adịghị eche ogologo oge - Ụdị dwarf niile na-eto nke ọma n'akụkụ ọ bụla nke ubi. Ọ bụ ezie na, dị ka ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ, ọ kachasị mma ịkụnye ya na mpaghara saịtị ahụ - n'ụzọ dị otú a ị nwere ike ichebe osisi ndị ọzọ site na windo ebe ugwu. Na mgbakwunye, nhazi usoro dị otú a ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ịnagide ọtụtụ ome.
Ọ bụghị na-achọ ka ala ala, ma ọ na-adịrị kacha mma n'akụkụ ebe.
Ọ dị mkpa! A naghị atụ aro ka ị kụọ ihe ndị bara uru na-esote n'akụkụ dwarf - osisi ahụ na-enye ọtụtụ ndị na-eto eto.
A na-akwadebe ebe a ga-esi na-akụ anụ mmiri n'otu izu - a na-egwu olulu ahụ ma na-edozi olulu (omimi na-adabere n'ogo nke mgbọrọgwụ). A ịwụ nke humus, otu tablespoon nke urea, otu uyi ash na obere ntụ ọka (n'ezie, mmiri niile a ga-ejikọta ya) ka a ga-abanye n'olulu ọ bụla ma kpuchie ya na fim. Ebe dị anya n'etiti olulu kwesịrị ịbụ 80-100 cm.
A na-emeso seedlings nke dwarf tupu a kụọ akuku na onye na-eme ihe na-akpali akpali ma tinye ya na olulu mmiri dị ọcha jupụtara na mmiri ọkụ. Ala nke gbara ya gburugburu nke ọma na mmiri. Iji mee ka ọgba aghara kwụsị, Na seedling kwesịrị 2-3 afọ.
Ọ dị mkpa! Iji gbochie ifuru site na-agbasa ebe niile, enwere ike igbochi ya ma ọ bụrụ na a kụrụ ya - kpoo akwa mgbochi ma ọ bụ ígwè 1 mita.
Admixture - unpretentious, oké ọkọchị - na ntu oyi-eguzogide osisi, ọdịda na nlekọta nke na-adịghị ewe oge buru ibu ma na-emekarị ka ọ ghara ịkpata nsogbu.
Mgbe akuku, ala nke di nso kwesiri igbapu ya iji kwado ikuku oxygen na usoro mgbidi. Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​ga-echefula banyere ịkwanye shreds (dịka ejupụtala, mmiri mmiri dị ka ọ dị mkpa) ma wepụ ata.
A na-egbutu ahịhịa dị na mongrel, na-ahapụ ya dị ka mulch.
Mgbe egwu ahụ malitere ịmị mkpụrụ, iji mee ka mkpụrụ osisi ahụ dị mkpa ka ọ bụrụ nri otu ugboro na oge. Iji mee nke a, jiri mullein ma ọ bụ humus (1 akụkụ mullein kwa 10 akụkụ mmiri) - 1 n'arọ kwa ohia ma ọ bụ ịnweta nri maka beri bushes - 70-80 g n'okpuru ohia.
Ọ dị mkpa! Ejila ihe ndị a na-atụ aro, ebe ọ bụ na ụfe nke nitrogen nwere ike ịkpata ọgwụgwọ.
Kwachaa onye na-eji ejiji bụ ihe kachasị na-ewe oge maka ịmalite ya. Osisi pruned ga-enwe ugboro atọ na oge. A ghaghị ime nke a na njedebe nke March, njedebe nke June na njedebe nke ọnwa July.
Oge ezumike sanitary kwachaa wepu alaka ndi mebiri emebi ma kpoo. Iji zere ndim, iji hụ na ìhè zuru ezu nke ìhè anyanwụ na ohere ikuku, na ngalaba osisi ọhịa 4-5 ndị ​​fọdụrụ na-amị mkpụrụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụ na-eto eto dị ka ogige, n'oge opupu ihe ubi i nwere ike inye okpueze ahụ mara mma site n'enyemaka nke ịkpụzi ihe.
A ghaghị iwepụ Ome Ome na ala.
Ebe ọ bụ na stalks bụ ntu oyi na-eguzogide ọgwụ, ọ dịghị achọ ebe obibi si oyi.
Otú ọ dị, spiny plum nwere ihe ize ndụ karịa oyi, ndị iro n'oge oyi - òké. Ka ha wee ghara imebi osisi ahụ n'oge oyi, ọ dị mkpa iji zoo snow gburugburu ya, a ga-echekwa ogwe osisi ahụ ma ọ bụ waya nkwụsị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na pommel na-agba oyi, ọ gbakere nke ọma n'ihi prishtambovy Ome na mgbada basal.
N'agbanyeghi na osisi dika osisi a, otutu ndi mmadu ana achota ka ha na-eto eto, eji ya eme ihe na omenala ruo oge ufodu. Ihe ndị a ma ama kachasị dị iche iche bụ ndị nnukwu mkpụrụ na-eguzogide oyi:
"Ụbịa". Ụdị dị iche iche dị iche iche na mkpụrụ osisi oval.
Agba nke mkpụrụ osisi chara acha acha anụnụ anụnụ, anụ ahụ dị ụtọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Differs n'oge ntozu okè.
"Nnukwu nri". Srednerosloy osisi 3-3.5 mita elu. A na-eji ya oge oge ịmị mkpụrụ, oge ịmị mkpụrụ na mkpụrụ (ruo 30 kilogram site n'aka osisi toro eto). Mkpụrụ osisi na-acha odo odo, oval. Anụ ahụ bụ obere ụrọ, na-egbu egbu ma na-atọ ụtọ. Ripens mbubreyo.
"Burluk". Osisi dị ala nke na-amalite ịmị mkpụrụ ngwa ngwa. Nmeputa site n'otu osisi - 20-25 n'arọ. Mkpụrụ - acha odo odo na-acha odo odo, ripen na September.
"Tenkovskaya acha anụnụ anụnụ". Osisi Srednerosloy. Mkpụrụ - ọkara (14 g), oval, ọchịchịrị -acha anụnụ anụnụ. Ripen na September. Anụ ahụ dị ụtọ, na-atọ ụtọ.
"Uzbek". Nri obere (20-25 n'arọ) osisi. Mkpụrụ osisi ahụ chara acha na Septemba ma na-acha odo odo nwere odo odo na-acha odo odo.
"Mkpụrụ buru ibu n'oge". Osisi ike na-adịghị ike nke na-eto eto ruo 2.5 m. Mkpụrụ osisi ahụ chara acha n'August, n'ụdị tozuru oke, odo odo, ubé. Ubu oke - 12 n'arọ sitere na osisi.
"Volzhsky". Amalite ịmị mkpụrụ n'afọ 4-5. Owuwe ihe ubi na-enye kwa afọ. Ụdị dị iche iche na-adọrọ mmasị na-atọ ụtọ. Mkpụrụ - ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke. N'ihe tozuru etozu, tomato anaghị enwe ume, na-atọ ụtọ na utoojoo.
"Nwekwuo oke". Osisi na-eto eto, osisi skoroplodny. Mkpụrụ osisi dị obere, chaa chaa na August-September. Ndị tozuru okè tomato nwere nwa na-acha anụnụ anụnụ tint.
Adhesives nwere ọtụtụ vitamin, acids, tannins, mineral, sugars, ya mere eweta uru bara ụba.
Ị ma? Na mba ụfọdụ, a na-agbakwunye mercuses na efere mbụ na nke abụọ dị ka acidulant, na France na mkpụrụ osisi na-amịbeghị mkpụrụ osisi ma nweta ngwaahịa nke yiri ụtọ na olive.
N'okpuru ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-eji mgwakota agwa mee mmanya na ịṅụ mmanya na-aba n'anya. A na-eji ọkpụkpụ dwarf mee carbon.
Ke adianade do, extrusion nwere nnukwu ego nke vitamin C - ọbụna karịa na currants, na epupụta nke osisi nwere ike brewed na-egbu dị ka tii.
Achọpụtawo ngosipụta nke ọnyá mercury na ọgwụ - eji ya eme ihe maka ọgwụgwọ maka ọrịa nke akụrụ, eriri afo, nsogbu na tract digestive na iji gbochie mbufụt na uzo uzo.
Na ọgwụ ndị mmadụ, mkpụrụ nke mgwakota agwa dị ka astringent maka afọ ọsịsa, a na-eji decorations nke ogbugbo na mgbọrọgwụ mee ihe dị ka febrifuge, a na-ejikwa okooko osisi dị diuretic, diaphoretic na laxative.
Ị ma? Site na mkpụrụ na mgbọrọgwụ nke mgwakota agwa kwadebe uhie agba.
Na-eto eto onye na-ede ihe na saịtị ahụ ga-ewetara ndị na-elekọta ubi ezigbo obi ụtọ. Mgbalị nta iji lekọta ya ga-alaghachi ihe ubi buru ibu. Mma a kwesiri ikwanye ebe a.
Ihe eji Baikal skullcap na ogwugwu omenala
"Ovsyugen Express": àgwà nke herbicide, esi eji
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Atụmatụ na-eto eto na-akọ: na-akụ ma na-elekọta